Ardayda Jaamacadda Jobkey oo u fariistay Imtixaan “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
In kabadan 2,500 oo arday oo wax ka barata Jaamacadda Jobkey ee magaalada Muqdisho ayaa u fariistay imtixaanka Jaamacadda, kaasi oo lagu qabanayo ilaa iyo afar xarumood oo labo ka mid ah ay Jaamacaddu ku leedahay Muqdisho, halka labada kale ay ku yaalaan magaalooyinka Jowhar iyo Beladweyne ee gobollada Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan.
Madaxa Imtixaanaadka Jaamacadda Jobkey Siyaad Barre Sheekh ayaa tilmaamay in ardayda ay tiradoodu gaareyso labo kun, shan boqol, lixdan iyo labo qof, isla markaana uu u rajeeyay in ay ku guuleystaan imtixaanka midterm-ka ee sanadkan.
“Waxaan u rajeynayaa ardayda ka qeyb qaadaneysa imtixaanka in ay guulo ka soo hoyaan, isla markaana keenaan natiijooyin wax kuool ah, waxaana u mahadcelinayaa maamulka sare ee Jaamacadda oo had iyo jeer isku howla kor u qaadida aqoonta ardayda wax ka barata Jaamacadda Jobkey” ayuu yiri Siyaad Barre.
Dhinaca kale, Madaxa Imtixaanaadka Jaamacadda Jobkey ayaa sheegay in qeybta Masterka ama heerka labaad ee Jaamacadda ay kala kaashanayaan Jaamacadda Cavendish ee dalka Uganda, iyagoo qaadanaya arday cusub oo noqoneysa dufcadii labaad, isagoo ugu baaqay ardayda Soomaaliyeed iney ka faa’ideystaan, iskana diiwaangeliyaan xarumaha Jaamacaddaas, iyadoo ardayda la qaadanayo ay tahay mid xadidan.
Saraakiil ka tirsan ciidanka XDS oo tababar uga socda dalka Turkiga oo la kormeeray “SAWIRRO”